Fotoana famakiana: 5 minitra Sarotra ny misafidy ihany 5 Easy nivezivezy Day By Train From Milan mba hizara aminareo. Ny renivohitry ny lamaody any Italia dia mavesatra amin'ny safidy hitsidihana mpizahatany. Tsy vitan'ny no feno lamaody, saingy manana tantara tsy mampino, maritrano, and beautiful scenery…
Fotoana famakiana: 4 minitra Roma dia tanàna tsara tarehy, fa indraindray ny mpandeha te hihinana kely isan-karazany. Ireo izay mijanona ao Roma ampy hijery ela dia mety maniry ny hanana Jereo manodidina ny faritra, koa. Soa ihany, izany no andro fitsangatsanganana dia ho an'ny! Rehefa dinihina tsara…